बिरामी रेफर गर्न अस्पताल र चिकित्सकसँग समन्वय चाहिने, ७७ जिल्लामा कमिटी गठन गरिने – Health Post Nepal
बिरामी रेफर गर्न अस्पताल र चिकित्सकसँग समन्वय चाहिने, ७७ जिल्लामा कमिटी गठन गरिने
२०७७ असार ५ गते १९:२२
चैत ९ मा वीरगन्ज महागनरपालिका–२२ का ३० वर्षीय सन्तोष यादव स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि पुगे। उनलाई सामान्य चेकजाँच गरेर उपचार सम्भव नभएको भन्दै चितवन कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल रेफर गर्यो।
उनी मिर्गौला र लुपसका बिरामी थिए। कोरोना अस्पतालमा पुग्दा उनलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या देखियो।
यादवलाई ज्वरो र रुघाखोकी देखिएपछि कोरोनाको आशंकामा टेकु अस्पतालमा स्वाबको नमूना परीक्षण पठाइयो तर रिपोर्ट नआउँदै उनको मृत्यु भयो।
मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको अवस्थामा लापरवाहीपूर्ण तरिकाले रेफर गरेका कारण उनको मृत्यु भएको जनाएको थियो ।
जेठ २६ मा नारायणी सामुदायिक अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचाररत एक बिरामीलाई भरतपुर सरकारी अस्पताल रेफर गरियो।
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नारायणी सामुदायिक हस्पिटलको भेन्टिलेटरमा उपचाररत ती पुरुषलाई साँझ साढे ६ बजे नै भरतपुर अस्पतालको आइसीयूमा सारिएको थियो।
बिरामी दम रोगबाट ग्रसित थिए र नारायणी सामुदायिक अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको थियो ।
जबरजस्ती सरकारी अस्पताल सार्दा जेठ २७ गत बिहान ७ बजे उनको मृत्यु भयो।
नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका–१६ का एक युवकलाई खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने र ज्वरो आउने जस्ता समस्या भएपछि परिवारले परासीको एक निजी अस्पताल पुर्याए।
उक्त अस्पतालले कोरोना आशंकामा उनलाई चितवनको पुरानो मेडिकल कलेजमा रेफर गर्यो। मेडिकल कलेजले पनि भर्ना लिन मानेन । आफन्तले काठमाडौंका केही निजी अस्पतालले पनि भर्ना नलिएपछि परिवारले बिरामी घरमै लिएर गए।
बिरामीलाई रूपन्देहीको मणिग्रामस्थित क्रिमसन अस्पताल र देवदह मेडिकल कलेज पनि पुर्याइएको थियो। त्यहाँ पनि भर्ना गर्न नमानेपछि बिरामीको चैत ७ गते प्रादेशिक अस्पताल बुटवल भर्ना गरिएको थियो।
माथिका यी त प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । कोरोना महामारीका कारण देश लकडाउनमा रहेका बेला अस्पतालले समवन्य नै नगरी बिरामीलाई एकबाट अर्को अस्पताल रेफर गर्दा सास्ती खेप्नुपरेको छ।
अस्पतालबाट बिरामीहरूले सेवा नपाएको गुनासो आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्बन्धित अस्पताल र चिकित्सकसँग समन्वय गरेर मात्र बिरामी रेफर गर्न अस्पतालहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाले अबदेखि अस्पताल र चिकित्सकसँग समन्वय गरेर मात्र बिरामी रेफर गर्न सूचित गरिएको बताए।
‘एक अस्पतालबाट अर्को अस्पताल रेफर गर्दा अस्पताल कहाँ छ, कसलाई भेट्ने, उपचार सम्भव छ कि छैन बुझेर जाँदा बिरामीले दुःखकष्ट पाउँदैनन्,’ डा. देवकोटाले भने, ‘बिरामीको उपचारमा सहजीकरणका गर्नका लागि जिल्ला स्तरमा पनि टिम गठन गर्न लागेका छौं।’
महाशाखाको नेतृत्वमा जिल्ला तहमा अस्पतालको अनुगमन गर्न, बिरामीको उपचारका लागि सहजीकरण गर्न उद्देश्यले टिम गठन गर्न लागेको उनले प्रष्ट पारे । उक्त टिममा सरकारी तथा निजी अस्पतालका व्यक्ति समावेश हुने र टिम गठन २–३ भित्र टुंगिसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
टिम गठनपछि बिरामीलाई एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा रेफर गर्दा सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको घटना सुन्नु नपर्ने उनको अपेक्षा छ।